Isihumushi esihle se-PlayStation 2 | Izindaba zamagajethi
UMiguel Hernandez | | Amakhonsoli, Imidlalo yevidiyo
Izwe lama-emulators libanzi futhi liyathakazelisa, kulabo abangenalo ukuxhumana okuningi nabo, yizinhlelo zesoftware ye-PC ezenza kube yikhonsoli ehambelana nokubuyela emuva. Kuyindlela ekhethwayo yabathandi bekhonsoli ukuze bakwazi ukukhumbula izihloko ezinhle kakhulu ze-PlayStation, I-Xbox, iNintendo Game Cube nezinye izinhlobo zokududuza ezivela eminyakeni engaphezulu edlule esingeke sikwazi ukudlala ngayo ngasizathu simbe. Ukufaka lolu hlobo lwesoftware imvamisa kulula futhi kuyashesha, futhi uma kukhona ongakwazi ungakhathazeki, ku-Actualidad Gadget sizokufundisa okudingayo.
Enye yezinto eziduduzayo enekhathalogu enhle kunazo zonke esingayicabanga kwakuyi-PlayStation 2, hhayi eyekhwalithi kuphela kodwa futhi nobuningi, yingakho iba uswidi wangempela wokulingisa, manje kuphakama umbuzo: Yini emulator engcono kakhulu yePS2? Hlala nathi uzobona ukuthi yikuphi okuthakazelisa kakhulu kulawa ma-emulators nokuthi ungayilungisa kanjani.
1 Yini i-emulator futhi kungani ngiyifaka?
2 PCSX2, the best PlayStation 2 Emulator
3 Ukucushwa kokuqala kwe-PCXS2
4 Ngingadlala kanjani ngesilawuli se-PCSX2?
5 Ukucushwa kokuqhafaza kwe-PCSX2
6 Iziphetho ku-PCSX2
7 Imidlalo engcono kakhulu ye-PlayStation 2
Yini i-emulator futhi kungani ngiyifaka?
Akudingeki unikeze izincazelo eziningi kakhulu okwamanje, uma ngabe uze lapha yingoba uyazi ukuthi kuyini. Empeleni, yisoftware leyo ikuvumela ukuthi udlale imidlalo yevidiyo kusuka kukhonsoli ngqo kwi-PC ngenxa yehardware yayo kanye nesistimu yokusebenza. Ngenxa yokulinganiselwa kwezobuchwepheshe, ngeke sithole ama-emulators esizukulwane sakamuva noma ama-consoles akamuva kakhulu, kepha kulula kakhulu ukuthola ama-emulators okhululiwe noma ama-retro consoles, ngoba kulula kakhulu ukuwahlelela lolu hlobo lokuqukethwe, futhi njengoba kunokuqukethwe okuningi kumanethiwekhi ngendlela yamakhophi wesipele wemidlalo yevidiyo.
Ngamafuphi, ukufaka lolu hlobo lwesoftware kuzokuvumela ukuthi udlale ikhonsoli yakho yakudala ngokungcebeleka kwakho ngqo kwikhompyutha yakho, ukuze ukwazi ukukhumbula lezo zihloko oke wazikhohlwa ngelinye ilanga ngenxa yezizathu ezithile. Ngakho-ke, uma ufuna "ukunikeza i-vice" ku-PlayStation 2, lokhu okuthunyelwe kwakho, sizokukhombisa ukuthi iyiphi i-emulator engcono kakhulu ye-PlayStation 2 ku-Windows 10 nokuthi ungakuthola kanjani konke ukusebenza okungasinika kona Asihambe!
Le software izibeke njengeyona ndlela engcono kakhulu uma kuziwa ekulingiseni i-PlayStation 2 ku-PC, ungacabanga ukuthi ikwenze ngokunembile ngenxa yegama layo noma ngenxa yekhathalogi yayo, kodwa iyaqhubeka kakhulu, i-PCSX2 iyakwazi ukuhlinzeka ukusebenza okuhle kwemidwebo esingakuthola kukhonsoli yangempela. Ngenxa yokuguqulwa ezingeni lesoftware nomphakathi wayo obalulekile, akunzima ukuthola imidlalo eguquliwe futhi okungeziwe kusoftware yokulingisa ukufaka umbono we- "HD" kumageyimu wethu wakudala we-PlayStation 2.
Singalanda i-PCSX2 ngqo kusuka ku- LONTO kuwebhusayithi yayo esemthethweni. Ngaphandle kweWindows 10, sinezinguqulo zeLinux ne-macOS, kungani ungakulindelanga lokho? Yebo ungalingisa i-PlayStation 2 cishe kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza. Ngaphezu kwalokho, ngaphakathi kwewebhusayithi sizophinda sithole okuqukethwe okufana nemihlahlandlela yokumisa, izindaba, izibuyekezo, amafayela nokunye okuningi. Uma ungumdidiyeli wohlelo, futhi unethuba lokuguqula ikhodi ye-PCSX2 ngoba imahhala, futhi uzokwazi ukwenza izinyathelo zakho zokuqala ngokulingisa.
Ukwenza lokhu kalula sizoya kulanda inguqulo ezinzile ngohlelo lwethu lokusebenza futhi sizolusebenzisa futhi silufake ngendlela efanayo esizofaka noma iyiphi enye isoftware enalezi zici ohlelweni, futhi ungakhathazeki ngokunye, sizokunikeza imibono eyisisekelo yokumiswa it.
Ukucushwa kokuqala kwe-PCXS2
Lapho sesiqale uhlelo okokuqala ngqa, nangemva kwewizard yokufaka, sizokhetha ulimi lwethu oluthandayo futhi sizogcina ama-plugins emulator (okungeziwe okuzosivumela ukuthi sithole ukusebenza okuningi kusuka kusoftware) ngokuphelele ngokuzenzakalela. Isinyathelo esilandelayo kuzoba ukumiswa kwe-BIOS, ngoba lokhu kumele ngaphambili silande i-PlayStation 2 BIOS ehambelana nesifunda sethu, noma leyo esiyithandayo kakhulu (uma ngokwesibonelo sifuna ukulingisa imidlalo ekhethekile evela eJapan).
Uma sine-PlayStation 2, ngaphakathi kwesigaba sokulanda se-PCSX2 sinayo I-BIOS Dumpler - Kanambambili (Landa), uhlelo oluzosivumela ukuthi sikhiphe i-BIOS ngqo kwi-PlayStation yethu uqobo 2. Uma kungenjalo sifuna ukulingisa i-PlayStation 2 ngqo kwi-BIOS okungeyona eyethu, sesivele singena ezindaweni zomthetho ongabazekayo, lapho-ke sincoma Ukuya emphakathini noma kwabezindaba ezikhethekile lapho ungathola khona i-BIOS, uhlala ungaphansi kwesibopho sakho (i-Actualidad Gadget ayihambisani noma inesibopho sokulingisa okungekho emthethweni noma olunye uhlobo lokuphanga ngabasebenzisi).
Lapho usukhethe ifayela le-BIOS nomhloli wefayela futhi ubona ukuthi lifakiwe kuhlu lwe-emulator yethu, sizochofoza ku- "OK" futhi sizoya kwisici esilandelayo sokumiswa, umyalo.
Ngingadlala kanjani ngesilawuli se-PCSX2?
Kuyalulekwa ukuthi uhlale uye kwifayela le- Windows 10 abashayeli abazitholile futhi balungiselelwe ngaphambiliEnye indlela enhle oyisebenzisayo nganoma yisiphi isilawuli se-Xbox, usuvele uyazi ukuthi ikhonsoli ye-Microsoft iyahambisana ngokuphelele ne-Windows 10, ngakho-ke ikhiphedi izofika ilungiselelwe futhi kuzodingeka ukuthi sixhume isixhumi se-USB futhi sijabulele isilawuli sethu.
Nokho, uma okufunayo ngempela ukuzuza kakhulu kokuhlangenwe nakho usebenzisa abalawuli be-PlayStation, Ngincoma ukulanda I-Motionjoy (Landa) lokho kuzosivumela ukuthi sixhume kuphela isilawuli sethu se-PlayStation 3 nge-USB ku-PC ukuyilungisa. Ukuze senze lokhu, sizofaka uhlelo bese sichofoza ku- "Driver Manager" ngesilawuli se-PlayStation 3 esixhunywe nge-USB, ngaleyo ndlela silande futhi sifake abashayeli abadingekayo.
Ngemuva kwalokho nabashayeli abafakelwe isilawuli se-PlayStation 3 DualShock 3, sizolanda I-DS3 engcono (Landa), eyakhelwe iWindows ezosivumela ukuthi silungiselele izinkinobho zesilawuli sethu se-PlayStation 3 ukuze konke kusebenze ngendlela engcono kakhulu. Ukusetshenziswa kwayo kunembile, ngokumane nge-DualShock 3 exhunywe yi-USB sizocofa ku- «Okusha» eduze kwe- «Iphrofayili ekhethiwe» futhi sizokwakha iphrofayili ezoba yiyona esiyisebenzisayo ukuyidlala.
Ukucushwa kokuqhafaza kwe-PCSX2
Manje okubalulekile ukuthola okuningi kukho, ngoba lokhu sizoqala i-emulator, njengoba sesinakho konke esikudingayo ukukudlala. Uma sesingaphakathi, sizocofa ku- «Amasethingi» bese sizoya ku- «Ividiyo> Izilungiselelo ze-plugin» Imenyu ye- I-GSD X10, ukumiswa kokuqhafaza kwama-emulators we-PlayStation 2 futhi kufanele sigcine eminye imingcele efana naleyo esizokunikeza yona ngezansi kumakhompiyutha aphakathi nendawo (i3 / i5 - 6GB / 8GB RAM - 1GB Graphics).
Okokuqala sizobheka isilinganiso sesikrini, singakhetha ukudlala u-4: 3 noma u-16: 9, konke kuzoncika endleleni oyifuna kakhulu, ngingumthandi wemvelo ye-panoramic. Lezi zilungiselelo zizoshintshwa "kuzilungiselelo zewindi" zezilungiselelo zevidiyo. Noma kunjalo, masikhumbule ukuthi imidlalo eminingi ye-PS2 yenzelwe ifomethi engu-4: 3.
Isixhumo: Sigcina izilungiselelo ezizenzakalelayo
Ukuhlangana: Sikhetha inketho "BOB TTF"
Umhlinzeki: Sishintshele kwinketho ye-Direct3D (i-D3D11 kumasistimu aphezulu)
Nika amandla i-FXXA: Simaka le nketho ukwenza kusebenze i-antialasing
Nika amandla ukuhlunga: Ngakho-ke senza kusebenze ukuhlunga kokuthungwa
Nika amandla i-FX Shader: Izophinde ithuthukise isigaba semidwebo uma siyisebenzisa
Ukuhlunga kwe-Anisotropic: Izothuthukisa ukwakheka, sizokhetha inketho ye-2X kumadivayisi aphakathi nendawo
Nika amandla i-Anti-Aliasing: Sizoyenza isebenze noma kanjani
Ngokuqondene ne isinqumo sokukhipha, sizodansa phakathi kwe-720p noma i-1080p, yize inhloso ukuthi sithatha njengereferensi ukuphakama kwesiqapha sethu futhi sikusebenzise esikalini se-4: 3 ukuze isinikeze imiphumela engokoqobo nengashintshiwe, yalokhu sisebenzisa ifomula elandelayo: (4x »ukuphakama kokuqapha kwethu») / 3 = XNakhu ukuthi sizosithola kanjani isisombululo esifanelekile sokukhipha ukuze sidlale lesi simisi esihle kumonitha wethu.
Ekugcineni, ngenxa yalezi zizathu, kanye nangomphakathi obalulekile ngemuva PCSX2. Sizothola kalula ama-plugins amaningi ku-inthanethi azosivumela ukuthi siguqule izici eziningi zemidlalo yevidiyo esifuna ukuyidlala ngentando. Impela, ukulingiswa kwezidudla ezilayishwe ngokuphelele ezinjengalesi kusivumela ukuba sikhumbule leyo midlalo emnandi esayishiya ngemuva ngolunye usuku ngezizathu ezahlukahlukene, ngakho-ke singasebenzisa ngokunenzuzo i-hardware yekhompyutha yethu ukuze senze ukusebenza okuncane esicini sokuzijabulisa.
Le emulator ibekwe kusukela ngo-2011 njengenye indlela eyinhloko okwalabo abakhumbulayo kwe-PlayStation 2, futhi okuthile kukhombisa ukuthi mhlawumbe kuzoqhubeka kube yisikhathi esizayo. Sethemba ukuthi lesi sifundo esihle nesincomo ku-emulator engcono kakhulu ye-PS2 kukusizile nokuthi ungazuza kakhulu kukho. Ngizothatha inkululeko yokuncoma eminye yemidlalo engcono kakhulu ye-PlaySation 2 engezansi.
Imidlalo engcono kakhulu ye-PlayStation 2
I-Metal Gear Solid 3: Idla Izinyoka
I-Grand Theft Auto San Andreas
Fantasy Final XII
IGran Turismo 3: A-Spec
UDeveli Angakhala 3: Ukuvuka kukaDante
UNkulunkulu Wempi Yesibili: Impindiselo KaNkulunkulu
INkosana yasePheresiya: Izihlabathi Zesikhathi
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Yini emulator engcono kakhulu ye-PlayStation 2?
Ukuthenga i-Samsung Galaxy S8 ngama-euro angama-644 sekuvele kungenzeka
Ukunikezwa kwe-Google Pixel 2 kusishiyela i-smartphone enesikrini sonke